सामाजिक सञ्जालमा सुरक्षित रहने टिप्स - हेटौंडा टुडे
०९ कार्तिक २०७८, मंगलबार
अर्थ / शेयर बजार
सामाजिक सञ्जालमा सुरक्षित रहने टिप्स
१० असार २०७७, बुधबार ०७:३०
हेटौंडा/सामाजिक सञ्जालले हामी सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याएर जोडेको छ । तर कहिलेकाँही होशियारी नअपनाउँदा यीनै सञ्जालबाट हामी स्क्यामर तथा ह्याकरहरुको चंगुलमा फस्न सक्ने सम्भावना हुन्छ ।
१.आफ्ना अडिन्स निर्धारण गर्नुहोस्
फेसबुकमा तपाईंले कुनै फोटो वा टेक्स्ट पोस्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो फोटो र पोस्ट कसलाई देखाउने र कसलाई नदेखाउने भन्ने कुराको निर्धारण आफैंले गर्न सक्नुहुन्छ ।
यसका लागि मेनुमा गएर थ्री डट बटनभित्र एडिट अडियन्समा क्लिक गर्नुहोस् । त्यहाँ कसलाई देखाउने वा कसलाई नदेखाउने वा कुनै व्यक्ति विशेषबाट लुकाउने भनेर तय गर्न सक्नुहुन्छ ।
२.पब्लिक वा प्राइभेट चयन गर्नुहोस्
तर ट्वीटर र इन्स्टाग्राम फेसबुक जस्तो लचिलो छैनन् । यी दुई माध्यममा तपाईंले आफ्नो पोस्टलाई या त पब्लिक या त प्राइभेट बनाउन सक्नुहुन्छ । त्यसभन्दा बीचको अप्सन हुँदैन ।
३.स्टोरीलाई लकडाउन गर्नुहोस्
इन्स्टाग्राममा पब्लिक वा प्राइभेट चयन गर्ने बाहेक अर्को एउटा सुविधा पनि छ । यसमा तपाईंले केही व्यक्तिबाट आफ्नो स्टोरीलाई लुकाउन सक्नुहुन्छ । यस अलावा तपाईंले कुनै निश्चित समूहले मात्र देख्ने गरी समेत स्टोरी पोस्ट गर्नसक्नुहुन्छ ।
यसका लागि सबैभन्दा पहिले इन्स्टाग्रामको मोबाइल एपमा जानुहोस् । आफ्नो प्रोफाइल पेज खोल्नुहोस् र दायाँतर्फ रहेको मेनु आइकनमा ट्याप गरी सेटिङमा प्रवेश गर्नुहोस् ।
अब प्राइभेसीमा क्लिक गर्नुहोस् । त्यसपछि स्टोरीहुँदै आफूले स्टोरी लुकाउन चाहेका व्यक्तिहरुलाई कन्ट्याक्ट लिस्टमा चयन गर्नुहोस् । साथै आफूले स्टोरी देखाउन चाहेको साथीहरुको समूहको सूची पनि तयार पार्नुहोस् । जब तपाईं स्टोरी पोस्ट गर्नुहुन्छ, त्यहाँ क्लोज फ्रेण्ड अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ ।
४.पोस्टलाई संरक्षण गर्नुहोस्
कुनै नयाँ पोस्ट पब्लिक गरेपछि त्यसलाई संरक्षण दिने केही तरिकाहरु छन् । ट्वीटरमा तपाईंको ट्वीटका रिप्लाईहरु लुकाउने अप्सन हुन्छ ।
आफ्नो ट्वीटको रिप्लाई नजिक रहेको एरोमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यहाँ हाइड रिप्लाईमा थिच्नुहोस् । रिप्लाई गर्नेलाई रिप्लाई लुकाएको थाहा समेत हुँदैन ।
इन्स्टाग्राममा पब्लिक फीडमा आएका र स्टोरीमा आएका सबै कमेन्टलाई ब्लक गर्न सकिन्छ । यदि कुनै कमेन्ट अनैतिक वा आपत्तिजनक लागेको खण्डमा त्यसलाई अटोमेटिकक रुपमा म्यूट गर्न समेत सकिन्छ ।
यसबाहेक यदि तपाईं कुनै निश्चित शब्दहरु देख्न चाहनुहुन्न भने म्यानुअल फिल्टरलाई टर्न अन गरेर त्यसको पनि समाधान निकाल्न सक्नुहुन्छ । तपाईंको पोस्टमा भएका कमेन्टलाई डिलिट गर्ने विकल्प पनि छ ।
यसका लागि आईओएसमा बायाँतिर स्वाइप गर्नुहोस् र एन्ड्रोइडमा केही समय थिँच्नुहोस् । यसरी रिप्लाइ तथा कमेन्टलाई डिलिट गर्न सकिन्छ ।
फेसबुक पोस्टमा कुनै पनि कमेन्टको नजिक रहेको थ्री डट मेनु वा कमेन्टमा धेरै समय थिचेर त्यसलाई डिलिट वा हाइड गर्न सकिन्छ । यसमा भने कमेन्ट गर्ने व्यक्तिले आफ्नो कमेन्ट हटाइएको कुरा थाहा पाउन सक्छ ।
५.अनावश्यक व्यक्तिलाई ब्लक गर्नुहोस्
यदि कसैले तपाईंलाई अनावश्यक तनाव दिइरहेको छ भने त्यस्ता मानिसहरुलाई आफ्नो फ्रेण्ड लिस्टबाट ब्लक गर्नुहोस् । फेसबुक, ट्वीटर र इन्स्टाग्रााम तीनवटै प्लेटफर्ममा आफूले ब्लक गर्न चाहेको व्यक्तिको प्रोफाइल खोल्नुहोस् र थ्री डट मेनुमा ट्याप गरी ब्लक अप्सन चयन गर्नुहोस् ।
इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई अर्को अप्सन रेस्ट्रिक्ट पनि प्रदान गर्दछ । यो पूर्ण ब्लक होइन । तर यसमा तपाईंले ब्लक गरेको व्यक्तिले तपाईंको पोस्टमा गरेको कमेन्ट तपाईंले अप्रुभ नगरेसम्म बाहिर देदिँदैन ।
साथै तपाईं अनलाइन रहेको कुरा पनि रेस्ट्रिक्ट भएको व्यक्तिले थाहा पाउन सक्दैन । इन्स्टाग्रामको यो फिचर विस्तृतमा बुझ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
६.अन्य प्रयोगकर्तालाई म्युट गर्नुहोस्
यदि तपाईं कसैलाई विविध कारणले ब्लक गर्न चाहनुहुन्न भने त्यस्ता प्रयोगकर्तालाई म्यूट गर्न सक्नुहुन्छ । जसको जानकारी उनीहरुलाई हुँदैन । यसरी म्युट गरिएका प्रयोगर्कताले तपाईंको फीड समेत देख्न सक्दैनन् ।
ट्वीटरमा जानुहोस् । आफूले चाहेको व्यक्तिको प्रोफाइल खोल्नुहोस् । त्यहाँ रहेको थ्री डट मेनु खोल्नुहोस् र म्यूट बटन चयन गर्नुहोस् । यस्तै इन्स्टाग्राममा प्रोफाइल खोल्नुहोस् र फलोइङमा ट्याप गरेर म्यूट ९स्टोरी वा पोस्ट वा दुवैमा० ट्याप गर्नुहोस् ।
यस्तै फैसबुकमा सम्बन्धित प्रयोगकर्ताको प्रोफाइल खोल्नुहोस् । त्यसपछि फ्रेण्ड बटन ट्याप गर्नुहोस् र अनफलोमा क्लिक गर्नुहोस् । यसो गर्दा तपाईंहरु फ्रेण्ड त रहिरहनु हुनेछ । तर उसले तपाईंको स्टोरी वा फीड देख्नसक्ने छैन ।
७.रिप्लाई र कमेन्टको नियम याद राख्नुहोस्
कसैको पोस्टमा कमेन्ट वा रिप्लाई गर्नु अघि ध्यान दिनुहोस् । किनभने यसले तपाईंको एक्सपोजरलाई बढाउन सक्छ । सामाजिक सञ्जाल अनुसार कमेन्ट र रिप्लाईका नियम फरक हुन्छन् ।
तर स्वभाविक रुपमा तपाईंको कमेन्ट वा रिप्लाई तपाईंले चाहे पनि नचाहे पनि उक्त पोस्टमा एक्सेस भएका सबैले देख्न सक्छन् ।
८.अरुको पोस्टमा आफू ट्याग नहुने
कसैको पोस्ट, कमेन्ट र फोटोहरुमा ट्याग हुन सबैलाई राम्रो लाग्दैन । खुशीको कुरा हाम्रा सामाजिक सञ्जालहरुले यसको सुविधा पनि दिएका छन् ।
फेसबुक प्रयोगकर्ताले आफ्नो सेटिङको टाइमलाइन एण्ड ट्यागिङमा रहेको ट्यागिङमा गएर आफूलाई ट्याग गर्न नमिल्ने गरी सेटिङ मिलाउन सक्छन् ।
यसो गरेपछि कसैले तपाईंलाई ट्याग गरेको खण्डमा त्यो तपाईंको रिभ्यू पोस्टमा आएर बस्छ । जून तपाईंले मात्र देख्न सक्नुहुन्छ । यदि तपाईंले सेटिङमा यसरी मिलाउनु भएको छैन भने प्रत्येक पोस्टमा गएर ट्याग रिभूम गर्न पनि सक्नुहुन्छ ।
इन्स्टाग्रामान एपभित्र रहेको सेटिङ मेनुमा जानुहोस् । त्यहाँ ट्यागमा क्लिक गर्नुहोस् । त्यहाँ तपाईंले ट्यागलाई आफ्नो इच्छा अनुसार आफ्नो टाइमलाइनमा देखिनेगरी अप्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ ।
ट्वीटरमा तपाईंले आफूलाई कतै मेन्सन गर्नबाट रोक्न भने सक्नुहुन्न । तर कुनै फोटोमा वा पोस्टमा आफूलाई ट्याग हुनबाट रोक्न भने सक्नुहुन्छ । यसका लागि प्राइभेसी एण्ड सेफ्टीमा ट्याप गरेर फोटो ट्यागिङमा जानुहोस् ।
९.आफ्नो लोकेसनमा ध्यान दिनुहोस्
फेसबुक, ट्वीटर र इन्स्टाग्राम सबैमा तपाईंको लोकेसनसँगै पोस्ट ट्याग हुन सक्छ । यसले तपाईंको लोकेसनको जानकारी सार्वजनिक गरिदिन्छ ।
जुन तपाईंको गोपनीयताको हिसावले राम्रो कुरा होइन । यसकारण आफूले काम गर्ने ठाउँ र बस्ने ठाउँहरुको लोकेसन शेयर नगर्नुहोस् ।
आफ्नो लोकेसनलाई इच्छाअनुसार अन तथा अफ गर्न सक्नुहुन्छ । लोकेसन अफ गर्दा तपाईंले पाउने अर्को एउटा फाइदा भनेको अनलाइन मार्केटरहरुले सजिलै विज्ञापनको निशाना बनाउन सक्दैनन् । किनभने उनीहरुसँग तपाईको पर्याप्त डेटा हुँदैन ।
१०.व्यक्तिगत जानकारीमा होशियार रहनुहोस्
सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो संवेदनशिल जानकारी तथा व्यक्तिगत जानकारी कहिल्यै पनि सेयर नगर्नुहोस् । आफ्ना प्रत्येक ससाना गतिविधिलाई सार्वजनिक गर्नु राम्रो होइन ।
रिलेसनशिप स्टाटस जस्ता संवेदनशिल जानकारी, पारिवारिक विवरणहरु सबै बाहिर नल्याउनुहोस् । भर्चुअल जगत विश्वासिलो हुँदैन ।
११.लग ईन विवरण सुरक्षित राख्नुहोस्
आफ्नो अकाउन्टलाई सुरक्षित राख्ने कुरा सधैं तपाईंको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । धेरै अकाउन्टमा एउटै पासवर्ड प्रयोग नगर्नुहोस् ।
साथै सजिलै अनुमान गर्न सकिने पासवर्डहरु पनि प्रयोग नगर्नुहोस् । यदि पासवर्डलाई सुरक्षा दिन चाहानुहुन्छ भने पासवर्ड म्यानेजर प्रयोग गर्नुहोस् ।
आफ्ना सबै अकाउन्टहरुमा टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसनको प्रयोग गर्नुहोस् । जसले तपाईंको युजरनेम र पासवर्ड बाहिरिए पनि तपाईंको अकाउन्ट सधैं सुरक्षित रहन्छ ।
१२.थर्ड पार्टी एपलाई डिसकनेक्ट गर्नुहोस्
आफ्नो डिजिटल जीवनका अन्य हिस्सामा जोडिन पनि तपाईं सामाजिक सञ्जाल अकाउन्ट प्रयोग गर्नुहुन्छ । यसअलावा तपाईंले ट्वीटर, इन्स्टाग्राम र फेसबुकमा पनि विभिन्न एड अन र प्लग ईन जोड्नु भएको हुनसक्छ । यो नराम्रो कुरा होइन ।
तर प्रत्येक पटक अतिरिक्त कनेक्सन बढाउँदै लैजाँदा यसले तपाईंको गोपनीयता र सुरक्षामा नै जोखिम पैदा गर्छ । धेरै एप तथा सर्भिसहरुमा आफ्नो फेसबुक, ट्वीटर र इन्स्टाग्राम अकाउन्टलाई नजोड्नुहोस् ।
के जोडिएको छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुहोस् । थर्ड पार्टी एपबाट आफ्नो अकाउन्टलाई अलग्याउनुहोस् ।
गायक सुगम पोखरेल हेटौंडा आउँदै
बुद्धीष्ट चुची फाउण्डेशन द्वारा हेटौंडा अस्पताललाई दुइवटा भेण्टीलेटर सहयोग
कोरोना विरुद्धको फाइजर खोप नेपाल आइपुग्यो
मनहरीमा घर नजिकैको जंगलमा झुण्डिएको अवस्थामा सुवेदीको शव फेला
आवास कार्यक्रम अन्तर्गत मकवानपुर र चितवनमा घर बन्दै
संयम मिडिया प्रा.लि. द्वारा संचालित
वाग्मती प्रदेश, संचार रजिस्ट्रारको कार्यालय दर्ता नं. ०००६२
कम्पनी दर्ता नं: २३७४५६/७६/०७७
कार्यालय: हेटौडा-०४, पारिजातपथ
सम्पर्क नं.: ०५७-५९०३११ / ९८५५०८८०६९
अध्यक्ष तथा कार्यकारी सम्पादक: मनोज देवकोटा
प्रवन्ध निर्देशक: सन्नु रिजाल
समाचार संयोजक: सागर सापकोटा
न्युज डेस्क: आँचल शर्मा घिमिरे
बजार प्रतिनिधि: गौरब अर्याल
हेटौँडाको प्रतिनिधि अनलाईन पत्रिकाको रुपमा परिचित यस हेटौँडा टुडे डटकम अनलाईन पत्रिका बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडाबाट संचालित अनलाईन पत्रिका हो । यसले मकवानपुर जिल्ला सँगै देश तथा विदेशका हरेक खबरहरुलाई आम जनमानसमा छिटो तथा प्रभावकारी ढङ्गबाट सम्प्रेषण गर्दै आईरहेको छ । आवाज विहिनहरुको आवजलाई आम जनमानसमा पुर्याउने हाम्रो पहिलो कर्तब्य हो । साथै छिटो तथा प्रभावकारी रुपमा डिजिटल पत्रिकाको माध्यमबाट डिजिटल रुपमा आम नेपालीहरुमा सूचना,जानकारी,विभिन्न गतिविधिहरु विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीसामु पुर्याउने काम गर्नको निम्ती यस अनलाईन पत्रिकालाई अझ प्रभावकारी र विश्वासिलो र जनमूखी बनाउनको निम्ती हामीलाई सदैभ तपाईको साथ र सहयोगको खाँचो छ । त्यसैले हामी तपाईको साथ र सहयोगको सँधै भर अपेक्षा गरिरहने छौँ । धन्यवाद
© २०१९ www.hetaudatoday.com. सर्वाधिकार सुरक्षित